Abasetyhini bavame ukubizwa ngokuba ngamaqhinga okudala kunye nobuchule. Bona, ngokomthetho, bafuna ukudala, ukuphucula, ukuhlobisa nokuphucula into. Baye banqwenela ukubandakanya abantwana kwinkqubo yokudala, kwaye kungekhona yabo kuphela, kodwa nabangaphandle. Kuwo onke amabhinqa kukho iindlela zokufundisa. Bathanda kakhulu oomama, ugogo nomakhulukazi ukuba bajongane nabantwana bazo zonke iintlobo zemisebenzi yezandla. Ukuba kuphela abazenzayo kunye kunye, abaqeqeshi abantwana babo - kwaye banqabile, badibanise, badibanise, baveze, baze baveze, benze.
Ewe, ukuba ufuna ukuhlaziya ukukhwela kwakho, ukusebenzisa iinjongo zakho zokufundisa abantwana ukuzisa abantwana kwihlabathi lobuhle, ndincoma ukuba uzibonele ekwenzeni iintyatyambo kwiphepha, esiza kuzenza ngezandla zethu. Akukho mfuneko yokuba nezakhono ezizodwa, kwaye izixhobo ziya kusetyenziswa kwiindawo eziqhelekileyo, kodwa inkqubo yokuvelisa iya kuba mnandi kubo bobabini kunye nawe. Yintoni enomdla kumanqaku afakwe ngesandla? Into ebaluleke kakhulu kukuba izinto ziyafumaneka. Kwaye kusenomdla kwiindlela ezahlukeneyo zobugcisa - oku kukukhupha, i-origami, i-kusudama kunye nephepha-plastiki. Konke oku kwenziwa kwimibala enemibala, ekhutshiwe okanye ephathekayo. Abantwana bathanda ukwenza iintyatyambo ezifana nezipho kubazali babo.
I-Rosettes eyenziwe ephepheni
Ukuze uvelise le mibala, ufuna iphepha elibomvu elinamacwecwe, ipensela kunye neesisi. Umsebenzi uphelelwe.
Kubalulekile ukusika iphepheni elivela kumaphepha, amacala ayo alingana no-10 cm.
Kwisikwele udwebe umgca ogciniweyo oqinileyo, ukuqala kwawo kufuneka udlule phakathi kwiphakathi, ulile kumgca wesikwere. Ukusuka emaphethelweni angaphandle kwiphepha, kuyimfuneko ukudweba isigaba ukuze kulandelelaniswe nomgca we-revolution yangaphambili.
Emva koko unqume ukujikeleza kunye nomgca.
Ukuqala ukusuka ekupheleni kwe-spiral, le yecandelo elichazwe ngasentla, kufuneka uluhlule kumqulu. Umoya kufuneka ujikeleze kwi-rose.
Nuvot intyatyambo yethu ilungile. Ezi roses zenziwe ngamaphepha zilungele iminqweno yokukhazimulisa, ngamakhadi okubulisa kunye namathambo. Yaye ukuba le mibala ibambelele kula masebe, uya kufumana umxholo omkhulu kwisiJapan.
Ukwenza iintyatyambo kwiphepha le-tissue
Le ndlela ilula kakhulu, kubantwana. Ezi ntyatyambo zibukeka zincinci, ziguquguqukile kwaye zininzi zomoya, zinjengezinto ezintle. Lungisa iphepha le-tissu, ibhola le-pinpong, ucingo oluthambileyo noluncinci. Kwakufuneka kubekho uboya bekotoni, iglue, i-millet croup, i-floristic tape.
Makhe senze i-stamens yokuqala. Ukwenza oku, sinqumla intambo zibe ngamacandelo amahlanu okanye asixhenxe amentimitha ubude. Ngomxholo wesahluko ngasinye, sivusa uboya obuncinane bekotoni, uhamba phakathi kweminwe. Siza kufaka isahlulo esicacileyo socingo ngephepha lesicu sombala omhlophe. Ukugqutywa ngentonga yepotton ifakwe kwi-glue, kwaye ibe yi-millet. I-Dalelezduet yenza iziqu zeentyatyambo kunye nakwicingo, ehlanganiswe kwi-tape floristic. Phantse ama-stamens anesibhozo anamathele kwisitshixo ngasinye, siyawaxhuma kwaye siwafaka nge-tape. Ngoku senza iipalali. Sika ii-rectangles zamaphepha ezinamavili, amacala abo afanele afane neeklentimitha ezilishumi. Sibeka ibhola kwiphepha kwaye siyibophe kwisiqingatha. Sitshintshela iziphelo zexande kwaye sikhuphe ibhola. I-calyx inekomityi, eneempophiso ezimbini ezibukhali zephepha eligubhayo. Sidibanisa i-lobes kwintambo, isebenzise ngokuqhubekayo, size sihlanganise nganye yeepalali nge-tape floristic. Sinqumle imiphetho ebukhali ukusuka ngaphandle kwaye siwaqondisa. Iintyatyambo zethu ezintle zilungele!
I-Peony eyenziwe kwiphepha elonakele
Abantwana abanqweneli ukwenza kuphela iphepha elikhutshiwe, abagcisa abanezakhono bafana nokwenza lo mbandela, kwaye bayakwenza ngokuvuya okukhulu, ngenxa yeentyatyambo zeeplanga ezinobuncwane zihle kakhulu. Unokwenza iirase, iindlawu, i-crocuses, i-peonies kunye nezinye iintyatyambo ezibukeka zendalo, ngamanye amaxesha zingcono kunokoqobo. Ukuze siqiniseke oku, siya kuzama ukwenza i-peony.
Ukwenza kwethu siza kuyidinga:
iphepha elibiweyo lobala oluhlaza, obomvana nolomthunzi;
ucingo lokwenza iintyatyambo;
glue, kuyinqweneleka, i-pencil ipensela.
Sinqumle iifalal ifomu ye-oblong ukwenzela ukuba iingcambu zincinci, kwaye iingqungquthela ezibanzi zenziwe i-wavy. Ukwenza intyatyambo enye, kufuneka ulungiselele izilwanyana ezilishumi elinesine, ukuphakama kwawo ngamnye kufuneka kube malunga neesentimitha ezingamashumi amabini. Emva koko, nqumle iphepha eliluhlaza iphepha eliphindwe kabini kwiintyatyambo. Ukuhamba, ububanzi beshumi kunye nobude obungama-centimitha amahlanu, uthathe iphepha eliphuzi. Kubalulekile ukuba uqwalasele i-nuance eyodwa-iibhola zeepalali kunye namaqabunga anqunywe ngokwe-share share of the paper. Ukuze inkozo egciniweyo ifakwe ecaleni kwinqanaba elide lomgca xa wenza i-yellow strips, vula iphepha. Sifaka umnxeba nge-tape floristic, ngelixa sitsala kwaye sitshisa. Ukufakwa kwiphepha eliphuzi kunqunywe ngendlela eyahlukileyo kwinqanaba, kwelinye icala kwisithathu. Emva koko, siwubophe iinqununu zesitshini ngendlela ehambayo, sishiya ii-acres kunye nomtya.
Ukuzilungele zonke nge-tape tape, ukuma ii-petals. Ukululaza ngokulula ngokubanzi, okwenza kube lula. I-Adhesive ilungisa iipalali kwisitshixo ukuze kufumaneke amathrekhi ambalwa. Ukulungelelanisa iipalali, unike i ntyatyambo ibonakale yendalo. Emva koko sibeka intambo kumagqabhagqabha, esasifakile kwi-floss tape kwaye siyifake. Impembelelo yeemvini zenziwa ngamaphepha afanelekileyo okuxoxela nge-wire. Unokutsala iphepha ukuze iindawo zamagqabantshintshi ziphendule. Siya kufaka amaqabunga kwiimpawu zethu kunye namaconti ethu amakhulu!
Ikhadi lekhadi ngoFebruwari 23, ezandleni zakhe, iklasi yeklasi kunye nesithombe
I-Technique yokuluka kwiintlobo
Shish kebab ngendlela yaseCaucasia
Ukuzalwa kweNkosi 2016: imbali yeeholide, iimpawu kunye nezithethe
UPolina Dibrova waba ngakhulukazi
Ukulungiselela ice cream ekhaya
Ummeli uVladimir Friske utshutshise uDmitry Shepelev wokuthumba umntwana